Ngothando lokufunda! | Language Centre
Posted on 12/11/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news
IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda.
NgoJulayi kulo nyaka, iZiko leeLwimi, iVriende van Afrikaans kunye nendawo yokuhlala abafundi iAcademia zilize izikolo ezimbini eStellenbosch ngeebhokisi ezinkulu ezimbini zeencwadi nezixabisa iR15 000. Kweli tyeli abawelwe ngumqa esandleni ziziKolo zamaBakala aPhantsi iBruckner de Villiers naseAF Louw. Ibhokisi yeencwadi nganye iqulethe iindidi ngeendidi zeencwadi zesiNgesi, isiAfrikaans nesiXhosa, kwaye isenokusetyenziswa njengethala leencwadi elihambayo, ngakumbi kwizikolo ezingenamathala eencwadi esiqhelo. Sithe sanenyhweba yokunxibelelana nabantwana xa besinikezela ngezi bhokisi zinkulu zeencwadi, sibafundela amabali kwaye sibafundisa ukuba bangaziphatha, bazikhathalele kwaye bazonwabele njani iincwadi. Sichwayitiswe kukufumana incwadana eyenziwe ngesandla enamakhadi emibulelo ebhalwe ngabantwana.
Elinye inyathelo elithe laveliswa yile projekthi yeebhokisi zeencwadi: siqalise ukufundela abantwana. Sibambisene neVriende van Afrikaans neAcademia, iZiko leeLwimi liququzelela iiseshoni zokufunda rhoqo ngeveki kwizikolo ezigcina iintsana ezilishumi elinambini nakwiiklasi zeekreshi zezikolo ezimbini ezazifumene iibhokisi zeencwadi kulo nyaka. Ngesi senzo, siyathemba ukuba sibumba uthando lweencwadi. Sikwakholelwa ekubeni olu tyalo luya kubanesivuno esichumileyo sokufunda. Ukuba unqwenela ukujoyina iqela lokufunda, nceda uthumele i-imeyili kuVernita Beukes.
Ngowe-7 Septemba, iZiko leeLwimi lothuse uninzi ekhampasini kwakhona ngokwenza iprojekthi ekuthiwa yitsunami yeencwadi phaya eNeelsie (kwiZiko labaFundi iLangenhoven). Lo msitho ukhethekileyo ububhiyozela uSuku lokuFunda laMazwe ngaMazwe ebelibhiyozelwa lihlabathi liphela ngowe-8 Septemba kulo nyaka. Iincwadi ebesiziqokelela kulo nyaka wonke zipakishwe eNeelsie ukwakha ‘amaza’ ngeencwadi. Naye nabani na obengena eNeelsie ebengaziphosa kuwo ukuchola incwadi angagoduka nayo. Besinesicelo esinye ke kodwa esithi: Emva kokuba eyifundile loo ncwadi lowo ebeyichole, uyacelwa ukuba ayidlulisele komnye umntu ukugcina la maza okufunda eqhubeka. Le yindlela yethu yokukhuthaza ukufunda. Ukuba unazo naziphi na iincwadi ongaliza ngazo kwitsunami yeencwadi elandelayo, nceda uthumele i-imeyili kuVernita Beukes.
Kwaye sisekuwo lo mxholo: iLebhu yokuFunda yeZiko leeLwimi incedisa abalesi abadala ukuba bafunde ngokukhawuleza nangokuhlakaniphileyo – akukhathaliseki nokuba loo nto kumele ifundwe ziingxelo zoshishino, amanqaku ophandonzulu okanye iiteksbhuku. Ukuba ufuna iinkcukacha ezithe vetshe ngeLebhu yokuFunda, thumela i-imeyili kuMarisca Coetzee.
The book tsunami and book chest projects
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Our languages Recent newsNgothando lokufunda!